Markii Aan Boga Hore Ee Marca Ku Arkay Warka In Real Madrid Ay I Doonayso, Waxaan Xidhay Telefoonkayga. – GOOL24.NET
Markii Aan Boga Hore Ee Marca Ku Arkay Warka In Real Madrid Ay I Doonayso, Waxaan Xidhay Telefoonkayga.
Inta badan ciyaartoyda way ku adag tahay in ay isku indho tiraan marka ay maqlaan koox wayn oo doonaysa iyaga oo ka ciyaaraya koox yar oo aan dhaqaale ahaan iyo magac ahaan ahayn kooxdii ay ku riyoonayeen, laakiin sababo jira awgeed waxaa mararka qaar dhacda in ay ciyaartoydu ay si rasmi ah ama si ku meel gaadh ah ay u diidaan in ay kooxo ku biiraan ay wali jeclaan lahaayeen in ay maalin uun ka ciyaaraan.
Maalmihii la soo dhaafay wargayska Marca ee Madrid ka soo baxa ayaa shaaciyay in Real Madrid ay doonayso goolhaayaha ree Croatia ee Karlo Letica kaas oo ah da’yar 21 sano jir hibo fiican u leh shaqadiisa laakiin waxa uu Marca sheegay in Madrid ay haddaba xidhiidh la samaysay wakiilka Karlo Letica si ay ula soo saxiixato haddii ay ku fashilanto heli taanka David De Gea ama Thibaut Courtois.
Haddaba goolhayaha ree Croata ee Karlo Letica oo hadda ka tirsan kooxda Hajduk Split ayaa ka war bixiyay sidii uu dareenkiisu noqday markii uu sawirkiisa ku arkay boga hore ee wargayksa caanka ah ee Marca iyo in Real Madrid oonayso. Karlo Letica ayaa sheegay in warkani uu layaab ku noqday isla markaana uu telefoonkiisa xidhay.
Sababta ugu wayn ee goolhaye Karlo Letica aanu warkan si sahlan ugu qaadan ayaa ah in aanu filayn in koox sida Real Madrid u wayni ay isaga oo 21 sano jir ah soo dalbanayso wuxuuna isku arkaa mid wali u baahan in uu sii wato shaqada uu ka hayo kooxdiisa hadda si uu u soo gaadho heer uu Real Madrid ama koox ugu ciyaari karo.
Goolhaye Karlo Letica oo ka dareen celinaya warkii uu dhawaan daabacay wargayska Marca ee Real Madrid lagu xidhiidhinayay ayaa yidhi: “Waxaan arkay boga hore ee Marca iyo wixii aniga la iga sheegay, sidaa daraadeed waxaan damiyay ama xidhay telefoonkayga. Runtu waxay tahay in warku layaab igu noqday. Watiga in badan laga hadli doonaa tan waa waqti danbe”.
Dhinaca kale wakiilka Karlo Letica ee Sinisa Soso ayaa isna arintan ka hadlay wuxuuna yidhi: “Sidaa daraadeed ka waran haddii aanu Real Madrid la hadalno? Karlo ma deg degsana, waxa uu si joogto ah ugu ciyaarayaa Hajduk taas ayaana ah waxa ugu muhiimsan”.
Wakiilka Karlo Letica ee Soso ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Waxaynu ka hadlaynaa mustaqbalkiisa, horumarkiisa iyo in waayihiisa ciyaared ay yihiin ujeedooyinkayaga ugu horeeya”.